Maanta Oo Kale: Dib U Milicsiga Guda Galkii Hargaysa Ee Ururkii SNM 31 May 1988 | WAJAALE NEWS
Maanta Oo Kale: Dib U Milicsiga Guda Galkii Hargaysa Ee Ururkii SNM 31 May 1988
May 31, 2018 - Written by Reporter:
Hargaysa (W,N)- Maata oo kale oo ay taariikhdu tahay 31-May waxa ay ku beegantahay 31kii May,1988, taas oo ahayd subaxnimadii ciidamadii Mujaahidiinta ahaa ee SNM xalay oo kale oo saq dhexe ahayd ka dhex hilaaceen gudaha Magaalda Hargaysa oo ay ku sugnaayeen ciidamadii Maxamed Siyaad Barre. Si kale haddii loo yidhaahdo waa sannad guuradii sagaal iyo labaatanaad (30aad) ee ka soo wareegtay gudo galkii SNM ee magaalada Hargeysa.
Magaalada Hargeysa bandoo casar dheere ah ayay dawladii Siyaad Barre ku soo rogtay. Dadka waxa ka muuqday dareen argagax leh, mana saadaalin karayn sida xaaladu u dhaci doonto. Weerarkaas ciidamada SNM ku soo qaadeen ciidamadii Maxamed Siyaad Barre waxa uu dhacay goor habeenimo oo caawa oo kal ah oo inta badan dadka reer Hargaysa hurdeen, waxaana mar kaliya lagu baraarugay dayaanka rasaasta iyo hilaaca hubka la isku ridayay ee ka baxayay Magaalada.